China otomatiki Yekumhanyisa Kumhanyisa uye Calendering Machine fekitori uye vanotengesa | Sunkia
Muchina uyu unotora mvura yemhando yehupfu yekubvisa mudziyo, iyo inogona kubvisa guruva pane inki yekudhinda uye nekuvandudza mhando yekugadzira. Musoro wekusvitsa oiri unotora iyo yepamusoro yekuita uye yakasimba vhiri rerabha, iwo chaiwo monotonous mafuta banga-iyo yekuchenesa iri nyore pasina kukuvadza mafuta tanker. Iyo banga rinogona zvakare kushandiswa kwenguva yakareba yenguva. Zvakare, kuonda kwepepa rekumashure kunogona kugara kuchichengetwa.
♦ Muchina uyu unotora mhando yemvura poda kubvisa chishandiso, icho chinogona kubvisa guruva pane inki yekudhinda nekuvandudza mhando yekugadzira. Musoro wekusvitsa oiri unotora iyo yepamusoro yekuita uye yakasimba vhiri rerabha, iwo chaiwo monotonous mafuta banga-iyo yekuchenesa iri nyore pasina kukuvadza mafuta tanker. Iyo banga rinogona zvakare kushandiswa kwenguva yakareba yenguva. Zvakare, kuonda kwepepa rekumashure kunogona kugara kuchichengetwa.
♦ Iyo vhiri yekupisa inotyora tsika uye inoshandisa yakanyanya kupisa tembiricha kuti iite yakakosha yekugadzirisa-inokodzera gasi, chiutsi, kupisa kwemagetsi pasina kuora, uko kunogona kuvandudza chigadzirwa uye nekushanda kwebasa.
♦ Ziso remagetsi rekumira pane inoendesa ndiro yesimbi, shandisa yakatumirwa yakatarwa kure-ziso remagetsi ziso, dzivisa ziso remagetsi kubva pakuratidzwa kune yakanyanya tembiricha, uye kuwedzera hupenyu hwebasa.
Delivery Iko kuburitswa kwepepa kunotora matatu-ese mapepa kurongedza, mhepo kumanikidza wedunhu-pasi ruzha, yakaderera kutadza chiyero, nyore mapepa kutsiva, yemahara sampling panguva yekushanda, chigadzirwa chitsva chakakunda zvakasiyana siyana zvitsva patents.
Tsanangudzo (W * L)
Magetsi Chinodikanwa (KW)
95kw (Electric kudziyisa mhando), 38kw (Steam mhando)
102kw (Magetsi kudziyisa mhando), 40kw (Steam mhando)
Divi (L * W * H) mm
Pashure: Otomatiki Yekumusoro-Yekumhanyisa Multifunctional Window Lamination Machine (Mvura-yakavakirwa Glue / Oily Glue / Pre-yakavharwa Firimu)
Zvadaro: Yakazara otomatiki Yekumhanyisa Makumbo-emusoro UV Varnishing Machine (multifunctional mhando) Dhayi, Kubata, Matte Oiling